कलाकारितामा जमेका नवराज - Paschimnepal.com
हामीसबैलाई थाहा भएको कुरा हो केही पाउन मेहेनत परिश्रम र समय गुमाउन आबश्यक छ । त्यसै क्रममा आफुलाई कलाकारिता क्षेत्रमा अगाडी बढाउन सक्दो प्रयास गरेर केही सफल भएका ब्यक्ति हुन नवराज सुबेदी । मध्यम बर्गिय परिवारमा जन्मेका सुबेदीको जन्म २०४१÷८÷५ गते बुवा लोक प्रसाद सुबेदि र आमा नन्दा सुबेदिको पहिलोसन्तान छोराको रुपमा बाँकेको कोहलपुर पिपिरीमा भएको हो ।
सानै उमेरमा धेरै मेहेनेत गर्ने नवराज सुबेदी ले आफ्नो बालापन गाँई बाख्रा घाँस दाउँरा आँफनो घर परिवार र पढाईमा बिताए । साथिभाई सँगको समधुर सम्बन्धलाई अगाडी बडाउदै जीबनमा सबैलाई आफनो बनाउन सफल नवराज सबैको मनमा बस्न सफल छन । जिबनमा जतिसुकै उताब चडाब आएता पनि कहील्यै नआत्तिएर त्यसलाई सामना गरदै गए ।उनले आफ्नो सानो छँदको बालापनको उमेर कोहलपुरको पिपिरीमा बिताए । घरपरिवारले पढेर केही बनोस भन्ने सोचेका बेला कसरी कलाकारिता तिर आईपुगे त प्रस्तुत छ उनि सँग गरिएको कुराकानी ।
कतीसालमा नेपालगंव्ज आउनुभो नि कस्तो लाग्यो तपाईलाई नेपालगंज ?
हामी सबै जना परिवार २०५५ सालमा नेपालगंनज आएको जस्तो लाग्ंछ त्यती बेला सानो थिए अलि फरक पाए नेपालगंजलाई किनभने गाउँबाट सहंर आउदा बुवा आमा भाई र म आएका थियौं तर पनि ठाँउ कहीलै पनि नदेखेको नौलो मानिस नौलो समाज आफनो साथिभाइ कोहीपनि नभएको त्यसैमा कोहलपुर भन्दा ठुलो शहर त्यैसैले होला मैले एक्लो महसुस गरेको अनुभव पाए ।
परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ ? बुवाले के गर्नुहुन्छ नि ?
परिवारमा हामि चार जना बुवा आमा भाई र म थियौ अहिले बढेको छ । बुवाले भन्नुपर्दा नेपालगंजमा हामी आँउदा रिक्सा चलाउनुहुथ्यो बुवा को कमाइैलेनै घरको भाडा स्कूलको फीस कीताब कपी कलम त्यसैमा आमाको दबाई बुवालेनै चलाउने र्गनुहुथ्यो । हाम्रो परिवारको स्थिति अतिनै सहनसिल र लगनसिल परिवार भएका कारण नाजुक हुदा हुदै राम्रै चलेको थियो । तर एकजनाको कमाईले खानुपर्ने हुँदा ४ जनाको परिवारमा गाह्रो चाँही थियो । तेसैले गारो हुन्थ्यो हामीलाई । यसरि नै दुखै दुखले ७ वर्ष बीतेको थाहा नै भएन ।अहिले चाँही मेलै पनि कमाउछु र भाईले पनि त्यसैले सहज भएको छ ।
तपाई यो कलाक्षेत्रमा कसरी आउँनुभो ?
जबहामी सबै परिवार सहित नेपालगंज २०५५ सालमा आएका थियौ त्यतिबेला म ७ कक्षामा महेन्द्र स्कूल उमाविमा पढ्थे । त्यती खेर नै यो क्षैत्रमा लागेको होे घरको स्थीती नाजुक हुदा हुदैपनी मनमा भएको रहरले गर्दा घरको नाजुक स्थितीले पनी आफनो रहरलाई मर्न दीएन र सिक्दैगए ।
सिक्नपनि मलाई ठूलो चुनौति थियो किनकि विनापैसा कसैले नसिकाउने र सिक्नलाई पैसाको खाचो पर्ने त्यो र्खच कसले दीने म धैरै सोचमा पर्थे मानिसलाई सोचेको र आफुले चाहेको सवै पाइने भएको भए साएद उ राजा हुने थियो होला तर मलाई राजा वन्नुथिएन किनकि आफु सामान्य घरको त्यति ठुलो सोच पनि बनाएको थिएन ।
त्यहीमाथि घरको जेठो छोरा भएकोले जिम्मेवारि पनि त्यतिनै ठुलो थियो ।अहिले बिभिन्न बिधाका गीत होस वा बिभिन्न भाषीका गीतहरु जुनसुकै क्षेत्रमा बस्ने नेपाली होस । पछिल्लो समय सबै खाले गीतहरु बजारमा आएका छन र मनपनि पराइएका छन । ती गीतहरुको मलै निर्देशन गरेको छु ।यो गरीरहँदा केही हदमा सफल भएको जस्तो लागेको छ मलाई ।बाँकी दर्शकहरुको मायाले म सँधै सफल हुने छु ।
कलाक्षेत्रमा लागेर खर्च धान्न गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरामा तपाई के भन्नुहुन्छ ?
त्यो आफ्नो आफ्नो सोच हो मेहेनत त जुन क्षेत्रमा पनि गर्नुपर्छ । महेनत गरेपछि फल अबश्यनै पाईन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसलै ईमान्दार र लगनशिल भएर काम गर्ने हो भने मज्जाले धान्न सकिन्छ । तर समय अनुसार परिवर्तन हुन पनि जरुरी छ ।
साथीभाई र घरपरिवारको कत्तिको साथ छ तपाईलाई यो क्षेत्रमा लागी रहँदा ?
साथीभाई र घरपरिवारको माया र हौसलाले नै यहाँसम्म पुगेको छु जस्तो लाग्छ ।म कलाक्षेत्रमा आएको त धेरै भएको थियो तर मलाई थाहा थिएन कि म निर्देशक भएर भगवानरुपी दर्शकहरुको माझमा उभिन्छु भनेर तर खोजेपछी तेउता भेटिन्छन भनेजसतै मेरो राष्ट्रीय गायक तथा संचारकर्मि जो आफैमा धैरै कलाले भरिपुर्ण ब्यक्ति प्रमोद डीजीसँग भेटभएपछी उहाँले गाएका दर्जनौ गितमा निर्देशन गर्ने मौका पाए ।
त्यसपछी मलाई धेरै सहज भयो यो क्षेत्रको बारेमा बुझ्न र यो क्षेत्रमा चिनिने मौका पाए । उनिहरुबाट हौसला साथ नभएको भए त सायद यो क्षेत्रमा हुने थिएकी थिएन होला थाहा छैन ।मेलै चाहेको हरेक क्षणमा साथ पाएको छु । किनकी कलाकार बन्ने कलाकारितामा लाग्ने धेरै हुनुहुन्छ तरपनि साथ भयोभने सहज हुन्छ ।
तपाईले त राष्ट्रिय अवार्ड पनि पाउनु भो कसको गितबाट के बिधामा पाउन सफल हुनुभयो नि ?
मैले नेशनल शाधना अवार्ड २०७६ मा उत्कृष्ठ निर्देशकको अवार्ड पाएको हुँ । मलाई सपोट गरनुहुने मेरो साथिपनि हुनुहुन्छ बरिष्ट सङगित कार केशव बडु र प्रमोद डिजी हुन जुन प्रमोद डिजी र मेलिना राईले गाउनु भएको हो ।तिमी सँग मेरो खुशी भन्ने बोलको आधुनिक गीतबाट पाएको हो ।मलाई यो भन्दा पहिले गीत निर्देशन गरे भैहाल्छ जस्तो लाग्थ्यो तर त्यतीमात्र होइन रहेछ त्यसको बिश्लेषण पनि हुन जरुरी हुँदो रहेछ त्यती बेला केशव बडु र प्रमोद डिजीले अवार्डका लागि फारम भर्न प्रोत्साहान नगरेको भए मेरो कामको मुल्याकंन हुने थिएन ।अब त मलाई अलिकति सहज भएको छ सबैमा चिनिन किनभने मलाई दर्शक स्रोताहरुले चाहे भन्दा धेरै माया दिनुभएको छ ।
कालाकारितामा नयाँ आउने साथीभाईहरुलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
नयाँ आउने साथीभाईहरुलाई धेरै भन्न त केही छैन यतिमात्र भन्छु की तपाईहरु धेरै ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ तर कलाकारितामा लाग्दा धैर्य धारणको पनि त्यत्तिकै आबश्यक छ । आफुभन्दा अग्रज कलाकारहरुको सम्मान र सानालाई माया गर्नुपर्छ ।अक्कासी फड्को मारे भन्दैमा आफ्नो मर्यादा भुल्नु हुदैन एकदिन अबश्य सफल भईन्छ ।
अन्त्यमा मलाई धेरै माया गर्नुभएको छ । मेरा भगवानरुपी दर्शकहरुले यसरी नै माया गरिदिनुहोला ।र मेरा साथीहरुलाई पनि हौसलाको लागी धन्यबादका साथै तपाइहरु नै मेरो पावर हो भन्न चाहान्छु । त्यसैले मलाई लाग्छ मेरो परिवार हौसला र मेरो सपना नै तपाईहरुको माया हो भन्न चाहान्छु ।
!-- .entry-content --> प्रकाशित मितिः मङ्लबार, पुस २२, २०७६ 3:40:33 PM
Prevतरुण अध्यक्ष विष्टद्वारा धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनलार्इ ५१ हजार सहयाेग
Nextगुराँसेमा चम्किइन् माेडल तारा